I-Oceanside Apartments Seascape
Indawo yokuhlala eseceleni kolwandle ibekwe kahle ukuze uhlole isifunda sase-East Cape, ukudoba i-Waihau Bay, noma ukuphumula endaweni ekahle engasebhishi kuleli theku elihle.
Ngemva kokuzinza e-Seascape Premium Apartment e-Oceanside, e-Waihau Bay, khululeka - jabulela ukubukwa okunwetshiwe kolwandle, ukudoba noma ukuhlola ulwandle - bese uqedela usuku lwakho ngokuchwaza ukushona kwethu kwelanga okumangalisayo.
Sitholakala ebhishi lase-Oruaiti eliphephile nelinesihlabathi (osesithombeni) elithathwa njengelihamba phambili mhlawumbe endaweni yase-East Cape.
Uma ufuna indawo enhle yamaholide engasebhishi engonakalisiwe, i-Oceanside e-Waihau Bay iyisinqumo esihle kakhulu.
Ibekwe ngaphesheya komgwaqo ngqo, kuwuhambo olufushane nje ukuya kuleli bhishi eliphephile, elinesihlabathi esimhlophe, likunikeza indawo enhle yayo yonke imisebenzi evamile yasebhishi, ukubhukuda, ukutshuza emanzini, ukuhamba ngezinyawo, ukutshuza emanzini, njll. - iyindawo engenabantu, ngokuvamile uzozizwa sengathi unaleli pharadesi elihle uwedwa, nakho konke elikunikezayo.
Yazisa ukubukwa okunwetshiwe kwe-Bay kusuka egumbini lokulala elikhulu nendawo yokuhlala, kanye nompheme onelanga. Womabili amagumbi okulala anokubukeka kwamanzi - khululeka futhi ubuke ulwandle ngokunethezeka kombhede wakho - noma uhlale endaweni evulekile evulekile enepulani egcwele ngaphambili, ubheke ngaphesheya kwamanzi- sinendawo yokupaka isikebhe etholakalayo.
Leli fulethi elinamagumbi amabili okulala linegumbi lezindlovukazi elilodwa, eliphindwe kabili - elinovulandi walo omncane, igumbi lokugezela elilodwa elifakwe kahle, ikhishi eligcwele elinohhavini, i-microwave, umshini wokuwasha izitsha kanye nokubukwa kolwandle ukuze ukunambitha, ngenkathi ulungisa ukudla kwakho kwasolwandle okusha!
Siyaxolisa, leli fulethi alizifanele izingane.
I-Waihau Bay Lodge: izidlo, izivakashi kanye nebha yehhotela, 5km eduze kwe-Bay.